China Design Nge Handwork China Manufacturers & Suppliers & Factory
Design Nge Handwork - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Design Nge Handwork)
indwangu yelin nge sequin
I-Model No.: JG7001
Uwubonile umklamo onje wokuthi ungagcini nje ngokufaka izinto ezingekho emthethweni kepha futhi ungeza ukubuka kwesitradi se-Umu-rter? Uma kungenjalo, manje ubona ukwakheka kwethu, ungamphendula ngokuqinisa uma abanye bekubuza umbuzo ofanayo ngokuzayo, usubonile. Le ndwangu, ethuthukisiwe isifakwe ngogqinsi olubunjwe...
intambo nge-bead sequin
I-Model No.: JH9003
Indwangu Engumbala Ocwengekile Okuluhlaza Oku-3D
Hot Orange Polyester Jacquard Yezingubo
Siyakwamukela vakashela i-Yanzi Textile, singabakhiqizi bezokwakha indwangu yaseJacquard enesipiliyoni sebhizinisi esingaphezu kweminyaka engu-10. Incwajana yethu e-orange esishisayo ihlanganisa imbali yephathini yejacquard, indwangu ebunjiwe ngejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo...
I-Classical Handwork Pearl Embroidery Lace
Indwangu yethu emnyama eboshwe ngombala yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke ukugqokwa kweparele lethu elimnyama kunethe xaxa futhi kuthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa...
I-Sky Blue Handwork Beaded Embroidery Lace
I-lace yethu yokufekethisa okwesibhakabhaka esibhakabhaka yenziwa nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke isibhakabhaka sethu sethanga lesibhakabhaka sikanokusho futhi sibucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka...
I-Pearl Tulle Lace ye-Navy Blue eyenziwe ngezandla
Intambo yethu yezandla yaselwandle eluhlaza okwesibhakabhaka yenziwa nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke ulayini wethuli oluluhlaza okwesibhakabhaka unethezekile futhi uthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
I-Stripe Beaded Handwork Pearl Lace
Umucu wethu we-tulle we-beaded bele wenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke ifileli lethu elenziwe ngesandla likanokusho futhi lithambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa kwengubo,...
Indwangu enemibala eyenziwe ngezandla eyenziwe nge-Tulle Lace
Intambo yethu eyenziwe ngombala eyenziwe ngezandla eyenziwe nge-polyester eyi-100%. Zakhelwe ngabaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu bukhona ukugoba ngesandla, ngakho-ke umsebenzi wethu wensimbi owenziwe ngeparele onsomi unethe xaxa futhi uthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni...
I-Handwork Beaded Embroidery Lace
Indwangu yethu ye-Handwork tulle yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke iflegi lethu elenziwe ngezandla elenziwe kahle likanokusho futhi liwubucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa...
Izindwangu Zendwangu eyenziwe ngezandla
Uthunga lwezimpaphe olwenziwe ngezandla lwenziwe nge-100% polyester. Zakhelwe ngabaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke ubucwebe bethu obenziwe ngezandla bukhazimula kakhulu futhi buthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado...
Indwangu ye-Tulip Feather Lace Handwork Glitter Lace Indwangu
Isikhumba sethu se-Tulip feather senziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho-ke ilantshi lethu le-Tulip elenziwe ngesandla likanokusho futhi lithambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa...
Indwangu Yezandla ye-Ivory Feather Mesh Lace Handwork
Indwangu yethu yezindlovu yezindlovu yenziwa nge-100% polyester. Zakhelwe ngabaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke umucu wethu wezimpondo zendlovu unethezeka futhi uthambile. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi, okokugqoka komshado nokufakwa kwengubo,...
I-White Handwork Feahter Embroidery Lace
Izintambo zethu mhlophe zenziwe nge-polyester eyi-100%. Zenzelwe abaklami abadumile, ukuthi yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu bufakwe ngesandla, ngakho-ke umucu wethu we-sequin omhlophe uthambile futhi uthambile. Imibala yokwehluka ingakhethwa emgqokweni wephathi, okokugqoka komshado nokufakwa kwengubo, njl. Udayi...
Izindwangu eziphezulu ze-Lace Custom Embroidery ezisezingeni eliphakeme
I-Design entsha Yezingubo Zokuhlobisa Izingubo
Izindwangu ezisezingeni eliphakeme ze-Orange Brocade Jacquard
Indwangu yethu ye-Orange Brocade Fabric ihlanganisa i-flower iphethini jacquard, indwangu enamaphethini wejometri, indwangu yejacquard yensimbi nokunye. Lesi sitayela osibukayo yi-Light Yellow brosha, eyenziwe nge-100% polyester, isisindo esikhanyayo, ongaphefumula futhi okulula ukusigeza. Yonke imininingwane yenziwe...
Indwangu yegolide ye-Sequin Lace enezimpaphe ezenziwe ngezandla
Indwangu yethu ye-Feather Embroidery Handmade sequins Indwangu yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjeke ngesandla, ngakho-ke imibala yethu emfushane yothayela emfushane indwangu ebushelelezi ibucayi. Imibala yokuhlukahluka ingakhethwa ekugqokeni kwephathi,...
I-Gold Metallic Sequin Embroidery Lace
Indwangu ephezulu ye-Pearl Mesh Fabric White Pearl
Indwangu ye-Green African Net Lace Pearl Embroidery
Design Nge Handwork
I-Beige Stone Handwork Fabric
I-Navy Blue Handwork Lace
Indwangu Yemfashini Yokwembatha nge-Handwork
I-Design entsha Ye-Embroidery
I-Fancy Design Tulle Fabric Lace
Handwork Lace Fabric